Guardiola oo si cad u sheegay kooxda uu doonayo inay adkaato kulanka caawa ee Bayern Vs Liverpool – Gool FM
Guardiola oo si cad u sheegay kooxda uu doonayo inay adkaato kulanka caawa ee Bayern Vs Liverpool
Dajiye March 13, 2019
(Europe) 13 Maarso 2019.Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa sheegay inuu taageeri doona kooxdiisii ​​hore ee Bayern Munich kulanka ay caawa kula ciyaari doonaan Liverpool lugta labaad wareega 16-ka ee tartanka Champions League.
kooxda Manchester City ayaa guul weyn ka gaartay kooxda Schalke 04 waxaayna kaga adkaadeen golal gaaraya ilaa iyo 7-0, waxayna si cajiib ah isaga xaadiriyeen wareega sidddeeda.
Guardiola ayaa ciyaarta kadib wuxuu raali galin u diray taageerayaasha reer England, maadaa uu doonayo in caawa ay guul gaarto kooxda Bayern Munich.
“Waan ka xumahay taageerayaasha Ingariiska, laakiin waxaan doonayaa in Bayern ay caawa soo baxdo”.
“Waan jeclahay magaalada Munich, sidoo kale waan jeclahay kooxda Bayern, waxaan halkaas ku leeyahay saaxiibo badan, waa ciyaar muhiim u ah labada kooxood, laakiin waxaan dareemayaa in Bayern ay u qalanto inay soo baxdo, waxaana rajeenayaa inay sidaas dhacdo”.
“Waa arin aad ugu fiican kubada cagta Ingariiska, in saddex kooxood England ah ay gaaraan wareega siddeeda, waxaa laga yaabaa in Liverpool ay soo gudubto”.
“Tobankii sano ee la soo dhaafay kooxaha reer Spain ayaa maamulayay wax walba, waa arin aad ugu wanaagsan kubadda cagta Ingariiska, in heerkan aan soo gaarno”.
“Cristiano Ronaldo waa kan ugu fiican aduunka” - Simeone
Michael Owen oo saadaaliyay ciyaarta caawa dhex mari doonta kooxaha Bayern Munich iyo Liverpool